Fantaro i El Hadji Ibrahima DIAGO, mpikatroka ho an’ny fiteny Wolof · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Mey 2022 16:54 GMT
Sary natolotr'i El Hadji Ibrahima DIAGO ary nahazoana alàlana ny fampiasàna azy
Anatin'ireo andiany ataonay amin'izao fotoana izao mba hanasongadinana ny asan'ireo mpikatroka mampahafantatra ireo fiteny afrikàna aty anaty habaka nomerika, tianay ny hanasongadina an'i El Hadji Ibrahima DIAGO (@elibdiago) avy ao Senegal.
Izy dia mpiteny Wolof, fiteny iray ampiasain'olona miisa 10 tapitrisa any ho any ho toy ny fiteny voalohany na faharoa ho azy ireo ao Senegal sy any amin'ireo faritra hafa ao Afrika Andrefana. Ny asany dia azo renesina ao anatin'ny rakipeo Wolof Tech manasongadina ireo hetsika mifandraika amin'ny teknôlôjia.
El Hadji Ibrahima DIAGO (EHID): Injeniera amin'ny solosaina aho ary mpandefa podcast nandritra ny taona marobe. Senegaly aho ary liana be amin'ny teknôlôjia vaovao ary efa hatrany amin'ny fahazazako izany. Taona roa lasa izay, noforoniko ny rakipeo iray antsoina hoe Wolof Tech izay fandaharana iray miresaka momba ireo teknôlôjia vaovao amin'ny fiteny Wolof, fiteny ao an-toerana any Senegal, ampiasain'ny efa ho 90% amin'ny vahoaka.
Nokarakaraina ho andiany maro ilay podcast, ka ny tsirairay aminy dia ahitàna fizaràna folo anasànay manampahaizana manokana, mpandraharaha, profesora, ary mpianatra mba hiresaka lohahevitra momba ny teknôlôjia vaovao.
EHID: Amin'izao fotoana izao, eo amin'ny sehatry ny teknôlôjia vaovao, tsy dia hita loatra ny fiteny Wolof. Ny ankamaroan'ireo tohana ara-pitaovana dia amin'ny teny frantsay sy anglisy, izay manilika ny ampahany betsaka amin'ny vahoaka, izany hoe, ireo tsy nandia fianarana izay manome ny 53% amin'ny mponina.
RV: Inona no manosika anao hanao izay hahitàna ny fiteninareo eny anaty habaka nomerika?
EHID: Inoanay fa ny fiteny dia fitaovana fotsiny ihany hidirana amin'ny fahalalàna izay natao rahateo ho an'izao tontolo izao, tsy manana tompo na loko io. Vitanay ary tsy maintsy vitanay ny hampiasa ny tenindreninay mba hidirana amin'ireo kazaram-pahalalàna rehetra. Ary io dia mitaky asa gaovana mba hahavitàna ny fandikàna ireo votoaty sy ny fampifanarahana ireo ohatra sasantsasany mba hahamora takarina kokoa ny fotokeviny.
Heverinay fa raha vitanay ny manao izay hahatakaran'ny vahoakany ny fiantraika sy ny lanjan'ireny teknôlôjia vaovao ireny eo amin'ny fiainan'izy ireo, ho vitanay ny hanana fisaina vaovao ho entina manatsara ny fiainan-dry zareo, ny asan-dry zareo sns…
Ny fiarahamiasa iray eo amin'ireo manampahaizana manokana amin'ilay sehatra sy ny vahoaka mila fiovàna sy fivoarana dia ho fiandohana vanimpotoana iray vaovao izay hitondra anay mankany amin'ny tena fivoarana izay ny rehetra no ho mpandray anjara, miaraka amina fanatsaràna goavana ny haavon'ny fahatakarana.
EHID: Tsy ampianarina any an-tsekoly ao Senegal ny fiteny Wolof. Tsy tafiditra ao anatin'ny fandaharam-pampianarana izy ary io no antony tsy hahavitan'ny vahoakanay na dia ny manoratra azy tsy misy diso fotsiny aza. Araka izany dia voamarikay ny fisiana baranahiny amin'ny fanoratana ireo voanteny, indrindra fa eny anaty tambajotra sôsialy.
RV: Inona no dingana mivaingana azo atao mba handrisihana ny tanora hanomboka hianatra ny fiteniny na hanohizany hampiasa ny fiteniny?
EHID: Ny dingana voalohany dia ny fampidirana ny fiteny Wolof ho ao anatin'ny lisitr'ireo fiteny ampianarina any anaty fandaharam-pampianarana mandrapaha-tonga hatreny amin'ny anjerimanontolo.
Ho ilaina ihany koa ny mampiroborobo ilay fiteny amin'ny alàlan'ireo hetsika santatra toy ny podcast ataonay, ary izany dia mikendry mivantana ireny olona ireny.
Ankehitriny, amin'ny maha-mpiteny frantsay ao anivon'ny orinasanay, tonga dia mivadika ho amin'ny fiteny anglisy ny fiteny ifanakalozana ao amin'ny fivoriana raha misy fandraisana anjaran'olona iray mpiteny anglisy. Noho izany, nahoana no tsy ny fiteny Wolof no ampiasina eo aminay samy izahay mba hifankahazoana tsaratsara kokoa, indrindra hatramin'ny nahamarihanay fa any amin'ny orinasa sasany, mazàna no matahotra haneho ny ao an-tsainy ireo mpiasa satria tsy te-hanao hadisoana.
Araka izany dia ‘ndeha isika hanana fahasahiana hanome lanja ny fitenintsika amin'ny fampiasàna azy ireny isanandro sy tsy misy diso alohan'ny hanjavonany. Adidintsika manoloana ny taranaka ho avy izany.